‘कोभिड–१९ विरुद्धको लडाइमा केन्द्र र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्दछ’ - SatyaPatrika
२०७८ असार ९, बुधबार प्रकाशित
सुर्खेतको लेकबेसी नगरपालिकामा हालसम्म १ सय ७५ जनामा कोभिड–१९ संक्रमण पुष्टी भएको छ । संक्रमणकै कारण हालसम्म १२ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । भने १ सय ३८ जना उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन् । हाल २५ जना सक्रिय संक्रमित रहेको नगरपालिकामा पछिल्लो समय कोभिड–१९ को संक्रमण दर घट्दो क्रममा छ । नगरपालिकाको स्वास्थ्य अवस्था, कोभिड–१९ विरुद्धको पहलकदमीलगायतका यावत विषयमा केन्द्रीत रहेर नगरप्रमुख गगन सिं सुनारसँग गरिएको कुराकानीः
कोभिड–१९ महामारी रोकथामका लागि लेकबेसी नगरपालिकाले के गरिरहेको छ ?
सर्बप्रथम त हामीले आमसंचारका माध्यमबाट जनचेतनामूलक सन्देश तथा सूचना प्रवाह गर्ने काम जारी राखेका छौं । जनप्रतिनिधि र स्वास्थ्यकर्मीमार्फत स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्ने, गराउने, साबुनपानीले पटक—पटक मिचीमिची हात धुने, अति जरुरी काम नपरी घरबाहिर नजाने, जानैपरे मास्क लगाउने। अन्य व्यक्तिसँग कम्तिमा २ मिटरको भौतिक दूरी कायम गर्नेजस्ता स्वास्थ्य सावधानी निरन्तर अपनाउन प्रत्यक्ष भेटेर वा सूचनामार्फत नगरवासीलाई सचेत बनायौं । यस्तै, नगरपालिकाबाट कोभिड–१९ नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि झण्डै एक करोड बजेटको व्यवस्था गरेका छौ । हामीले १५ बेडको आइसोलेसन कक्ष तयार पारेर आवश्यक सामाग्रीको व्यवस्था गरेका छौं भने स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई पनि सेवा अवधिमा बस्ने व्यवस्था मिलाएका छौं ।
कोभिड–१९ संक्रमितका लागि अक्सिजनको आवश्यकता र आपूर्तिको अवस्था के छ ?
कोभिड–१९ संक्रमणबाट गम्भीर भएका बिरामीका लागि अक्सिजन नभएर नहुने रहेछ । उपचारको प्रमुख विधि नै अक्सिजन भएकाले सुरु–सुरुमा त एकदमै गाह्रो भयो । अहिले नगरपालिका आफैले अक्सिजन खरिद गरेको छ । केही संघसंस्थाले पनि उपलब्ध गराएका छन् । हाल अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर पनि व्यवस्था गरिसकेका छौं । अक्सिजनको मात्रा नाप्ने सामाग्री पर्याप्त मात्रामा छ । स्वास्थ्यकर्मी पनि एकदमै खट्नु भएको छ । हाल अक्सिजनको अभाव छैन । यदि बिरामीको चाप बढेमा आवश्यक औषधि उपकरणसहित नगरपालिकाले अक्सिजन व्यवस्था गर्नेछ।
जिल्लामा जारी निषेधाज्ञा अलि खुकुलो बनाइएको छ । लेकवेसीमा निषेधाज्ञाको प्रभाव कत्तिको प¥यो ?
सुरु–सुरुमा बढ्दो संक्रमण नियन्त्रण गर्न तथा कोभिड–१९ रोकथामका लागि लकडाउनबाहेक अरु केही विकल्प थिएन । त्यसैले लेकवेसीका नागरिकले पनि हाम्रो सुरक्षाका लागि राज्यले लकडाउन गरेको हो भन्ने बुझ्नुभयो । र, नागरिकबाट हामीले राम्रो साथ पनि पायौं । निषेधाज्ञा कार्यान्वयनमा कोही बाधक बनेनन् । तर, दैनिक ज्याला मजदूरी गरेर खाने मजदुरलाई भने अलि बढी नै समस्या भयो । काम गरी खाने मजदुरहरुको अरु विकल्प छैन । अब निषेधाज्ञा खुकुलो बन्दै गएकाले मजदुरलाई पनि सहज हुन्छ भन्ने अपेक्षा छ । लकडाउनले विकास गतिविधिमा पनि प्रभाव पा¥यो । तर, पनि लेकवेसी नगरपालिकामा स्थानीय प्रसासनबाट सहयोग भयो । निषेधाज्ञा कडाइमा हामीले पनि प्रयास ग¥यौ । तर स्वास्थ्यका मापदण्डको पालना गरेर विकास निर्माणका कामहरु निरन्तर संचालन नै रहे ।
कोभिड–१९ रोकथाममा अभियानमा प्रदेश र केन्द्र सरकारबाट के कस्तो सहयोग प्राप्त भयो ?
जुनसुकै कुरामा योजना कार्यान्ययन गर्न आर्थिक चाहिने भएकाले कोभिड–१९ महामारी रोकथाममा पनि अलि बढी नै आर्थिक आवश्यक भयो । जसमा केन्द्र र प्रदेश सरकारसँग समन्वय जारी राख्यौं । तर, जति हुनुपर्ने त्यति सहयोग नभएको महसुस गरेका छौं । अबका दिनमा पनि महामारी नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि आवश्यक सहयोगको अपेक्षा छ । कोभिड–१९ विरुद्धको लडाइमा केन्द्र र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गर्नु पर्दछ ।
कोभिड–१९ रोकथामका लागि नगरपालिकाले व्यवस्थापन गरेको बजेट के मा खर्च भइरहेको छ ?
यसका लागि हामीले झण्डै एक करोड बजेटको व्यवस्था गरेका छौं । यो बजेट पनि अपुग भयो भने थप बजेट पनि व्यवस्थापन गर्नेछौं । हामीले बाटो, स्कुलजस्ता अन्य भौतिक पूर्वाधारमा जोड दिनुका साथै स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथामिकतामा राखेर काम गरिरहेका छौं । जनताको जीवन रक्षा गर्न हामी लागि परेका छौं । यो अभियान निरन्तर नै रहनेछ । त्यो हाम्रो दायित्व पनि हो । अहिले पनि कोभिड–१९ महामारी सकिएको छैन । तसर्थ, स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरिदिन सबै नगरवासीलाई अनुरोध पनि गर्छु । नगरपालिका महामारी रोकथामका लागि बजेट व्यवस्थापनसँगै सबै विकल्प अपनाउन तयार छ ।
खाना खोज्दै हात्ती भान्छामा छिर्‍यो
गण्डकीमा भागबण्डा नमिल्दा, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीका आकांक्षी काठमाडौंमा